3 nka ime ka ehihie oyi | Ọrụ On
Ọzụzụ 3 iji mee ehihie oyi
Jenny monge | 20/11/2021 10:00 | Crafts, Crafts maka ụmụaka, Nzughari
Ndewo onye obula! N'isiokwu taa anyị ga-ahụ crafts atọ ime ugbu a na oyi na-abịa. Ha zuru oke iji were awa ole na ole na-atụrụ ndụ dịka ezinụlọ.
Ị chọrọ ịhụ ihe nka ndị a bụ?
Ị nwere ike ịhụ ka esi eme ndị a crafts nzọụkwụ site nzọụkwụ na-esonụ video:
N'okpuru ebe a, anyị na-egosi gị nka otu otu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ha n'otu n'otu.
1 Ọrụ # 1: ero mara mma
2 Ọrụ # 2: Peacock nwere Cardstock
3 Nka # 3: Azụ nwere Egg Cup
Ọrụ # 1: ero mara mma
Ngwá ọrụ a zuru oke, ebe ọ bụ na ọ dị mfe ime, ọ na-atọ ụtọ ma mgbe ahụ ọ nwere ike chọọ ụlọ akwụkwọ ọ bụla mma. Kedu ihe ọzọ, ọ bụrụ na anyị etinye eriri n'elu, anyị nwere ike kpọgidere ya n'osisi ekeresimesi.
Ị nwere ike ịhụ otu esi arụ ọrụ a n'otu n'otu na njikọ ndị a: Ero na akwa katọn
Ọrụ # 2: Peacock nwere Cardstock
Ọrụ nka dị mfe ime, naanị akwụkwọ ma ọ bụ kaadiboodu nke anyị nwere n'ụlọ ga-achọ. Anyị ekwesịghị ịzụta ihe ọ bụla pụrụ iche, anyị nwere ike iji akwụkwọ akụkọ wee tee akụkụ dị iche iche nke peacock na acrylic.
Ị nwere ike ịhụ otu esi arụ ọrụ a n'otu n'otu na njikọ ndị a: Peacock na kaadiboodu
Nka # 3: Azụ nwere Egg Cup
A na-ejikwa iko akwa eme ọrụ a, ya mere anyị na-eji ihe eji eme ihe ma n'otu oge ahụ na-ekpori ndụ. Ihe dị mma banyere azụ a bụ na onye ọ bụla nwere ike ịchọ ya mma site na ịse ya otú ọ chọrọ na ịhọrọ ụdị ntù ha masịrị. Kedu maka ịhụ azụ nke kacha mma n'ime ihe niile ị na-eme?
Ị nwere ike ịhụ otu esi arụ ọrụ a n'otu n'otu na njikọ ndị a: Azụ dị mfe na iko akwa na kaadiboodu
Na njikere! Anyị na-ama nwere ọtụtụ nhọrọ nke crafts ime na ụmụntakịrị nọ n'ụlọ, na ihe mere na ọ bụghị, soro ya na nri na Christmas e ji esiji ákwà.
Enwere m olileanya na ị ga-enwe obi ụtọ ma mee ụfọdụ n'ime ọrụ nkà ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Ọzụzụ 3 iji mee ehihie oyi
Ihe eji achọ osisi ekeresimesi mma 1
15 mara mma na mfe chere crafts